केही समयपछि विवाह गर्ने योजनामा छु, मेरो पार्टनरलाइ पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? - नयाँ कुरो
केही समयपछि विवाह गर्ने योजनामा छु, मेरो पार्टनरलाइ पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ?
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:४०
जिज्ञाशा : केही समयपछि म विवाह गर्ने योजनामा छु। पहिलो यौन सम्पर्कलाई लिएर के–के कुरामा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ? के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ र?
डा‍. सुमनराज ताम्राकार, स्त्री तथा प्रसूति विशेषज्ञ
नेपालमा धेरैजसोले विवाहपछि मात्र यौन सम्पर्क स्थापित गर्दछन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ। तथापि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उच्च शिक्षासँगै विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध राख्नेको संख्या बढेको छ। त्यसैले पहिलो यौन सम्पर्क र सुहागरात ९मधुरात्रि० को यौन सम्पर्क अलिकति फरक छ।
तर, पनि विशेष परिस्थितिवश वा दुवैको सहमतिमा यौन सम्पर्क राख्न नसकिने भने होइन। मानिसमा कौतुहलता हुन्छ। ऊ नयाँ अनुभव सँगाल्न चाहन्छ। यस क्रममा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क आफ्नो प्रेमिका, चिने जानेका वा व्यावसायिक यौनकर्मीसँग हुनसक्छ।उचित यौन शिक्षा एवं प्रजनन अंगको विस्तृत जानकारीको अभावमा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क धेरैजसोका लागि त्यति सफल र सुखदायी हुँदैन। डर, त्रास, हतार, हतास तथा असुरक्षित वातावरणमा यौन सम्पर्क राख्नु पर्दा यौन सम्पर्क पूर्वको तयारीमा खासै ध्यान जाँदैन।
कौमार्य भंग भए पनि लचिलो योनिच्छद नच्यातिएको हुनसक्छ भने यौन सम्पर्क वेगरको अन्य शारीरिक क्रियाकलाप ९साइकल चढ्दा, घोडा चढ्दा, खेलकुद० ले पनि पातलो योनिच्छद च्यातिएको हुनसक्छ। धेरैजसो विवाहपूर्वका यौन सम्पर्क योजनाबद्ध नहुन सक्छन्। यसका कारण प्रजनन जटिलता भने निम्तिन सक्दछ।
पहिलो पटकको यौन सम्पर्कका बेला पुरुष यौनसाथीमा लिंग उत्तेजना नहुने, शीघ्र स्खलन हुने समस्या हुनसक्छ भने महिला यौनसाथीमा गर्भ रहला कि, यौन सम्पर्कपछि धोका देला कि, कसैले थाहा पाउला कि, बेइज्जत होला कि भन्ने डरले पूर्ण रूपमा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्र्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा पहिलो यौन सम्पर्कको क्रममा हाइमेन ९योनिच्छद० च्यातिई हल्का रक्तस्राव वा रगत मिसिएको योनिस्रावले झन् त्रास उत्पन्न गराउँछ।
आफ्नै प्रेमिका वा परिचित व्यक्तिसँग पहिलो पटकको यौन सम्पर्कपछि निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ। यस क्रममा महिनावारी, यौनांगमा पीडा वा कुनै यौन समस्या वा पहिलो पटकको यौन सम्पर्कपछि कुनै तनाव, पिर, चिन्ता तथा उदासीपना छरछैन बुझ्नु पर्छ। कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा आफ्नो यौनसाथीलाई भरपूर सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूले साथ दिने ढाडस दिनुपर्छ।
यस्तो कार्यबारे सम्बन्धित अभिभावकले थाहा पाएको खण्डमा गालीगलौज गर्ने, डर त्रास देखाउनेभन्दा पनि आफ्ना सन्तानलाई निश्चिन्त बनाई तिनीहरूलाई परेको समस्याको समाधान गोप्य तवरले गरिदिनुपर्दछ। यसबाट पाठ सिकी भविष्यमा नैतिक मूल्य, मान्यता कायम राख्न सल्लाह दिनुपर्छ। पहिलो पटकको यौन सम्पर्क तुलनात्मक रूपमा असुरक्षित हुनसक्छ। त्यसैले सदैव सुरक्षित सेक्सको पालना गर्नुपर्छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट
एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा
युरोकप फुटबल : आज
कोपा अमेरिका फुटबलमा अर्जेन्टिनाको
युरोकपमा फुटबलमा आज तीन
विश्वकप छनोट खेलमा जोर्डनसँग
सुमधुर दाम्पत्य जीवनका लागि
फोक्सो स्वास्थ् राख्न र